Afuufa wax taaj oo kale Machine, Hollow wax taaj oo kale Machine, caaryada duritaanka - Kingswel
kingswel mashiinada waa mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ee wax soo saarka ee dharbaaxo mashiinada wax taaj oo kale oo adduunka ah. Shirkadda waxaa majoring berrinkii naqshadaynta, wax soo saarka iyo iibinta dhammaan noocyada qalabka wax taaj oo kale dharbaaxo kaas oo ku haboon yihiin soo saarta alaabta caag godan sida dhalooyinka caagga ah, oo dheryay ku, oo foosto, sanduuqyada, bacaha, alaabta lagu ciyaaro, baakidh caag ah, caag ah super-weyn foosto iwm la shaqo ka 0.01-5000 litir. 1000-litir mashiinka ugu weyn godkii jab-wax taaj oo xaq halkan jooga. Iyadoo 60% shaqo ee suuqa, noocyada kala duwan ee shirkadda ayaa worldwidely iibiyey Southeast Asia, Europe, America, dalalka Arabia iwm Allthe qaybaha wax soo saarka ayaa maray shahaado of American UL, CSA ama IS09000 (2000) in ka dhigaysa badeecada inuu noqon doono wax soo saarka tayo ugu sareeya caalamka.
Nala soo xiriir Read More
mashiinka khaas ah koollo hawada